Friluftscafé - Dackestupet | Nleta Hultsfred
hem » Rie ma drinkụọ » Café » Friluftscafé - Dackestupet
South nke Virserum bụ ụlọ ọrụ Dackestupet na Friluftscafé - Dackestupet. N'oge oyi, a na-enwe ebe a na-eme ski na oge ndị ọzọ maka ịnyịnya igwe, MTB na njem. N’elu ụlọ elu ahụ, ị ​​na-emeghe otu ụlọ waffle. Nwee gofika na echiche magburu onwe ya nke obodo Virserum na Virserumssjön. Ebe njem zuru oke!
Ntughari 1, 570 80 Virserum, Sverige
4.4 si 5.0
Nyocha 77 na Google
4/5 ọnwa 3 gara aga
Ọdịda ski dị mma na nlele dị mma na Virserum.
4/5 ọnwa 6 gara aga
Nlere mara mma ma gbaa oyi.
Nwere Stig Robertsson
Ezi Mbido megide corona. Dackestupet zuru oke maka ezinụlọ nwere mmasị ịga.
5/5 ọnwa 9 gara aga
Ebube mara mma mara mma na ọtụtụ ndị na-aga ebe dị mma
Ezigbo ezinụlọ. Ebe dị iche iche ị na-amị.
Frendo na Hultsfred
Cgbọ mmiri nke Café
2021-06-21T10:38:22+02:00Camping, Café, Kayak|